Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Milkiilaha Chelsea Oo Go'an Adag Kasoo Saaray Haaland, Iyo Qodob Kale Muhiim Ah
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Suuqa kala iibsiga: Milkiilaha Chelsea oo go’an adag kasoo saaray Haaland, iyo Qodob kale muhiim ah
Wararka Suuqa kala iibsiga: Milkiilaha Chelsea oo go’an adag kasoo saaray Haaland, iyo Qodob kale muhiim ah
March 17, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Wargeysyada 0
Qeybta Danbe Suuqa kala iibsiga 17 Maarso
Tottenham ayaa isha ku heysa inay iska dirto 24 jirka reer Colombia Davinson Sanchez xagaaga, waxaana ay durbaba raadinayaan bedelka daafaca dhexe. Footballinsider
Milkiilaha Chelsea Roman Abramovich ayaa ka dhigaya saxiixa weeraryahanka reer Norway Erling Braut Haaland oo 20 jir ah kooxda Borussia Dortmund inuu yahay shaqadiisa gaarka ah xagaagan. Dial star
Weeraryahanka reer Portugal Cristiano Ronaldo, oo 36 jir ah, ayay u badan tahay inuu ku biirayo Manchester United halkii uu ku laaban lahaa Real Madrid haddii uu ka tago Juventus xagaagan. Tuttosport.
Qeybta Hore Suuqa kala iibsiga 17 Maarso
Liverpool ayaa ka fiirsaneysa inay xagaaga u dhaqaaqdo 23 jirka qadka dhexe ee reer Norway Sander Berge oo ka socda Sheffield United. Eurosport
Manchester United ayaa wadahadalo la furtay wakiilka 23 jirka daafaca uga ciyaara kooxda Fiorentina Nikola Milenkovic. Calciomercato
Paris Saint-Germain ayaa dooneysa inay qandaraas xirfadle ah ku xirto 17 jirka Daniel Labila, laakiin waxay halis ugu jiraan inay si bilaash ah ku waayaan xagaagan. Foot Mercato
Barcelona ayaa u furan inay Antoine Griezmann ku badasho weeraryahanka Juventus Paulo Dybala, sida uu sheegayo Calciomercato .
Sevilla ayaa hoos u dhigeysa qiimaha xidiga diirada u saaran Manchester United Jules Kounde – sida laga soo xigtay The Sun .
Inter ayaa diyaar u ah inay iska dirto seddexda qadka dhexe ee Matias Vecino, Arturo Vidal iyo Radja Nainggolan – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Saxiixyadii lacagta badnaa ee ay Chelsea lasoo saxiixatay xagaagii lasoo dhaafay, Timo Werner iyo Kai Havertz, waxaa lagu badali karaa ciyaartoy cusub dhamaadka ololahan ilaa ay si weyn kor ugu qaadayaan ciyaartooda. Melchiot ayaa u sheegay Talksport